के “सिनोभ्याक”को परीक्षणको नतिजा चीनले सार्वजनिक गर्यो? « LiveMandu
के “सिनोभ्याक”को परीक्षणको नतिजा चीनले सार्वजनिक गर्यो?
२ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०९:५०
सुयोग ढकाल । नेपाललाई छिमेकी देश लगायत धेरै मुलुकहरुले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । त्यसमा भारत अग्रपंक्तिमा रहेको छ । नेपाललाई कोरोना महामारीविरुद्धको अचुक अस्त्र कोभिड-१९ खोप उपलब्ध गराउने पहिलो मुलुक बन्‍यो भारत । नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले भारतको सीरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको खोपलाई मात्रै आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिएको छ ।
भारतले नेपाललाई १० लाख डोज खोप सहयोग गरेपछि चीनले पनि तीन लाख डोज खोप प्रदान गर्ने घोषणा गर्‍यो र पछि २ लाख डोज थप गर्ने निर्णय गर्‍यो । चीनले पनि खोप कूटनीतिमा भारतलाई पछ्याइरहेको भए पनि नेपालमा चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मले उत्पादन गरेको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको छैन । चिनियाँ कम्पनीले अनुमति माग गरे पनि आवश्यक डकुमेन्टहरु उपलब्ध गराएको पनि छैन । कागजी प्रक्रिया हुँदै गर्ला अहिले खोप नलगे नेपाललाई पछि उपलब्ध गराउन सकिने छैन आशयको चीनको धम्कीपूर्ण पत्रमा चीन र परराष्ट्रबिच पत्र जुहारी नै चल्यो ।
सम्बन्धीत सामाग्री यहाँ पढ्नुहोस्
चिनियाँ खोपका विषयमा परराष्ट्र र दूतावासबीच ‘पत्र जुहारी’, तत्काल खोप लैजान चिनियाँ दूतावासको ‘चेतावनी’
नेपालको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कुनै राजनीतिक संकट आएको अवस्थामा निकै सक्रिय बन्‍ने चीन अहिले खोपको मामिलामा भने शान्त भएको देखिन्छ । यद्यपि चीनले नेपाललाई पाँच लाख डोज खोप दिने आश्वासन भने दिएको छ । तर यो खोप परीक्षणको तथ्यांक उपलब्ध गराउन भने चीनले अस्वीकार गरेको छ । जसकाकारण यस खोपको प्रभावकारिता र सुरक्षाको विश्वसनीयतामाथि विश्व प्रश्न उठेको छ ।
पाकिस्तानमा प्रयोग भइरहेको चिनियाँ खोप सिनोभ्याक १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरुलाई मात्रै लगाउन थालिएको छ । तर, यो खोप लगाएका केहीमा गम्भीर असर परेको समेत पाइएको थियो । पेरुले पनि चिनियाँ कम्पनीले विकास गरेको खोप प्रयोगमा ल्याएको थियो । तर, यसको असर देखिन थालेपछि अहिले प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
एकातिर यस खोपले नकारात्मक असर गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ, चिनियाँ खोप भारतीले उत्पादन गरेको खोप भन्दा महँगो छ । चिनियाँ कम्पनीले विकास गरेको एक डोज खोपको मूल्य १९.३० डलर पर्छ ।
बेलायतले पनि नेपाललाई भारतको सीरम इन्स्टिच्युटमा उत्पादन भएको खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरि रुस पनि आफूले विकास गरेको स्पुतनिक भी खोप उपलब्ध गराउने जनाएको छ । तर, नेपालमा प्रयोगका लागि भने यसलाई अझै अनुमति दिइएको छैन । नेपालमा प्रयोगका लागि अनुमोदन भएको एक मात्र खोप भारतको सिरम इन्स्टिट्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप हो ।
चीनले आफ्नो खोप प्रभावकारी भएको दाबी गरे पनि आवश्यक परीक्षण नतिजाका तथ्यांकहरु भने उपलब्ध गराएको छैन । उक्त तथ्यांकहरु उपलब्ध नगराउँदा चिनियाँ खोपप्रतिको विश्‍वसनीयतामाथि थप प्रश्‍नहरु उब्जिएका छन् ।
#स्पुतनिक भी खोप
काठमाडौँका यी अस्पतालबाट लगाउन सकिन्छ कोरोनाविरूद्धको खोप (सूचीसहित)
काठमाडौँ- सरकारले फागुन २३देखि ५५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत कोरोना भाइरसविरूद्धको खोप लगाउँदै छ । फागुन २३देखि चैत्र १५
काठमाडौं । भारत बायोटेकले तयार पारेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ‘कोभ्याक्सिन’ ८१ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको पाइएको छ । कम्पनीले बुधबार तेस्रो
महिनावारीको दुखाइ कम गर्ने घरेलु उपाय
काठमाडाै । महिनावारीको समय अधिकांश महिलाहरु पेट दुखाइको समस्याबाट गुज्रिरहेका हुन्छन्। विशेषगरी तल्लाे पेटकाे दुखाइ सहन नसकेर कतिले औषधि समेत सेवन
अनुहारको दाग हटाउने ७ टिप्स
मानिसको व्यक्तित्वमा उसको अनुहारको ठुलो भूमिका हुने गर्दछ । झट्ट हेर्दा सफा, राम्रो र चम्किलो अनुहारले सबैलाई प्रभावित पार्दछ ।